Cisbitaalka GMC Gaalkacyo oo Shacabka Adeegyo cusub u soo kordhiyeey (Sawiro) – Radio Daljir
Maarso 9, 2019 11:48 b 0
Cisbitaalka GMC dhagacade ee Magaaladda Gaalkcyo siiba Puntland ayaa shacabka Puntland usoo kordhiyeey IRM Machine oo horey an loo keenin Puntland marka laga reebo Muqdisho.
IRM Machine Waa Maashiin lagu baaro Maskaxda ,isla markaana dadka ay u aadi jireen dalka dibadiisa iyo waliba Muqdisho balse hadda waxaa laga helaya Magaaladda Gaalkcyo ee xarunta Gobalka Mudug.
Dr Cabdixakiin Siciid Xasan Gooni oo Waraysi gaar ah siyeey Radio Daljir ayaa kawarbixiyeey Mashiinkan Casriga ah iyo baahiya ay u qabeen shacabka Puntland.
Halkan ka dhageyso Waraysiga Dr Gooni.
Hoos Kadaawo Sawiradda Mashiinka Maskaxda lagu baaro.
Taariikhda Suldaan Bashiir Muuse Koonte (Akhriso)